18 Xaqiiqooyin xiiso leh oo aniga igu saabsan oo qof walba jeclaan lahaa inuu ogaado: Wararka Dugsiga ee Hadda
18 Xaqiiqooyin Madadaalo ah oo aniga igu saabsan oo qof walba jecel yahay inuu ogaado
Xaqiiqooyinka Madadaalo ee Aniga Ku Saabsan: Haddii aad samayn lahayd liistada "xaqiiqooyinka xiisaha leh ee aniga igu saabsan," maxaad ku dari lahayd? Waan ogahay waxa ay dareemeyso marka lagu weydiiyo inaad u sheegto xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan naftaada. Marar badan ayaad ku jahwareertaa waxyaabaha aad dhihi karto si aad xukun uga sameysato naftaada.
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa tilmaamo ku saabsan sida loo qoro xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan naftaada oo lagu taageeray tusaalooyin ku hagaya.
Waxaa jira waxyaabo badan oo muhiim ah naftaada oo aad u baahan tahay inaad ka hadasho. Waxyaabahan oo kale ayaa hoosta lagaga wada hadlayaa.
1. Hiwaayadda aan ugu jeclahay waa…
Maxaad qabataa waqtigaaga firaaqada ah? Shakhsiyan, Hiwaayaddayda ugu fiican waa barashada, heesida iyo qoob-ka-ciyaarka.
2. waan jeclahay
Ma jiraan wax, qof, ama meel aad jeceshahay? Maxaa qalbigaaga xanuunaya? Maxaa kuu xiisay markii ay tagtay?
"Waan jeclahay dabbaasha asxaabteyda".
3. Waxaan eegay…
Ma jiraa qof aad caabudaan? Kumaa kugu mashquuliya? Yaad jeceshahay inaad wax ka barato?
Shakhsiyan, qofka ugu horeeya ee aan kor uqaadaa waa ilaahay. Isaga ayaa sabab u ah wax kasta oo igu dhaca nolosha.
Aniga oo gabar keli ah, qofka xiga ee aan kor u fiiriyaa waa hooyaday maxaa yeelay waxay ula jeedaa aduunka oo dhan aniga. Wali waxaan fiirinayaa sifooyinkeeda wanaagsan.
4. Farshaxankan ayaa ila hadlaya maxaa yeelay…
Coco Chanel ayaa yiri, "Si aan loo noqon karin mid waa inuu marwalba ka duwanaadaa."
Tani waxay igu dhiirrigelineysaa inaan marwalba raaco qalbigeyga wax kastoo jira. Weligay raaci maayo heerarka iyo xeerarka bulshada xun maxaa yeelay iyagu ima qeexaan.
5. Xusuus qosol / ceeb igu ah waa…
Waa maxay qalad ceeb ah oo aad gashay oo cashar kuu noqday?
Markaad dadka kale ka qosliso waxay rabaan inay waqti ku qaataan oo xusuus kula qaataan! Tani waa madadaalo. Ha ka baqin inaad isku xishooto. Waxaad u soo bixi doontaa sida dhulka, oo hawl fudud, oo daacad ah.
6. Waxaa i saameeyay…
Haddii uu jiro qof saameyn ku yeeshay noloshaada sinnaba, waad ka hadli kartaa.
Shakhsiyan, waxaa saameyn igu yeeshay asxaabteyda. Waxay u muuqdaan inay ku darayaan qaar ka mid ah qiyamka wanaagsan noloshayda waana ugu mahadcelinayaa taas.
7. Xayawaanka gurigayga (koleyda) waa asxaabteyda maxaa yeelay…
Kaliya dadka murugaysan ma jecla maqalka xayawaannada timaha leh, xitaa haddii xayawaankaaga xayawaanku ay khafiif yihiin oo xayawaan jilicsan dadka oo dhami ay jecel yihiin maqalka sheekooyinka xayawaanka!
“Xayawaankeygu waa asxaabteyda maxaa yeelay waxay i dareensiiyaan inaan jeclahay oo aan cidlo ahayn”
8. Waxaan ka baqayaa…
Shakhsiyaddaada waxaa daaha ka qaadi kara waxyaabaha aad jeceshahay iyo waxyaabaha aad neceb tahay, oo ay ku jiraan waxyaabaha aad ka baqdo. Waxaan ka baqayaa isbeddelka iyo waxa aan la garanayn, sidaa darteed, mustaqbalku waa mawduuc walaac kicinaya oo aniga la igala hadlayo.
"Waxaan ka baqayaa masaska".
9. Anigu waxaan ahay sida aan ahay maxaa yeelay…
Maxaad soo martay nolosha oo kuu qaabaysay qofka aad tahay maanta? Xusuusnow inaad maskax furan tahay oo u oggolow naftaada inaad u furfurto asxaabtaada. Waad la yaabi kartaa sida dadka kale uga jawaabaan iyo / ama waxa dadka kale u adkaysteen sidoo kale.
Anigu waxaan ahay sida aan ahay maxaa yeelay Ilaah baa i jecel.
10. Sheyga aan caadiga ahayn ee laga heli karo qolkaaga hurdada…
Waa maxay sheyga ugu caamsan gurigaaga, khaanadda miiska xafiiska, iwm.
Tani waa xaqiiqo xiiso leh oo naftaada ku saabsan oo si fudud ugu noolaan kara an naxdin leh wada hadal. Ka fikir qufacyadaada iyo kala duwanaanshahaaga!
"Hal shey oo aan ku haysto qolkeyga jiifka ayaa ah badeecadayda".
11. Shaqadayda riyadaydu waa…
Kulliyadda dhexdeeda, “Waa maxay waxaaga weyn?” waa su’aal baahsan. Si kastaba ha noqotee, ka bood bayaanka caajiska ah ee "Waxaan ku qaadanayaa…" oo si qoto dheer ugu tag waxa ay riyadaadu tahay (waxaan rajeynayaa inaad sababaha ugu waaweyn ee riyadaada riyadaada ah).
Waa maxay shaqadaada riyadu - waa shaqada kaliya ee aad jeceshahay inaad hesho haddii aadan sameynaynin waxa aad hadda qabanayso?
“Shaqadaydii riyadayda ayaa jilaysa”
12. Hibooyinkayga qarsoon waa…
Ma leedahay kartiyo qarsoon oo dadka badankood aysan aqoon?
Angelina Jolie waa mindi tuurista. Kendall Jenner soo saari kara qeylada shimbiraha. Amanda Seyfried way goyn kartaa waana toli kartaa. Ma jiraan wax gaar ah oo aad sameyn karto? Dadka qaar waxay leeyihiin hibo naadir ah oo gaar ah, laga yaabee inaad ka fikiri kartid hibo qarsoon oo aad adigu leedahay!
"Tayadayda qarsoon ayaa heesaysa"
13. Buuggayga sanad dugsiyeedka sare ee superlative
Sidee dadku kuugu tilmaameen buugaaga sanad dugsiyeedka sare?
"Dadku way igu ogaayeen dugsiga sare inaan ahay gabar yar oo cod yar leh"
14. Ciyaaraha aan ugu jeclahay waa…
Ma leedahay cayaar aad inta badan ku raaxeysato?
"Isboortigeyga ugu fiican waa kubbadda koleyga runti waan jeclahay ciyaarta"
15. Waqtigeyga ugu wanaagsan waa…
Goorma ayey tahay waqtigaaga ugu fiican?
"Anigaygu waa markaan keli ku ahaado qolkayga anigoo fikiraya".
16. Guulihii aan ku faanayay
Waa maxay waxqabadka aad ugu faanto?
"Markaan ku jiray dugsiga sare, wali waan ku faraxsanahay inaan sameeyay ardaygii ugu fiicnaa dugsigayga oo dhan".
17. Taleefankayga gacanta ee ugu horreeya
Sharaxaad ka bixi taleefankaaga gacanta ee ugu horreeyay iyo waxa aad ku jeclaatay ama ku nacday.
“Taleefankaygii ugu horreeyay wuxuu ahaa Blackberry Android. Waan ka helay maxaa yeelay wuxuu ahaa taleefan cadaan ah oo android ah laakiin waan necbahay maxaa yeelay marwalba wuu sudhanaa taas oo dib u dhac igu keentay ”.
18. Xilligeyga iigu xumaa waa…
Waan ogahay inaad adigana ku haysatid waqtigaagii kuugu xumaa. Tani waxay noqon kartaa daqiiqado aadan rabin inaad dhacdo.
"Xilligeyga iigu xumaa waa markaan xanaaqo".
Waxaan si xoogan u aaminsanahay in tilmaamaha kor ku xusan, aad si qumman u qori karto xaqiiqooyinka xiisaha leh ee naftaada ku saabsan. Ha ka waaban inaad isku daydo. Fadlan hoos u dhig qayb haddii qodobkaan waxtar lahaa.
UNILORIN Jadwalka Imtixaanka Galitaanka Dugsi Sare 2019 | Jaamacadda Ilorin
Qoritaanka Deloitte Nigeria ee Hogaaminta IT
PortaGermany Scholarships 2021/2022 Ardayda Caalamiga ah Cusboonaysiinta
Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed ee Kanada 2021 Cusboonaysiinta Ardayda Caalamiga ah
Unity Bank Plc Mideynta Mashruuca 2018 iyo Sida loo Codsado
Hada Codso Barnaamijka Wadajirka ee Komishanka Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ee loogu talagalay Dadka kasoo jeeda Afrika, Geneva (Waa Fulin buuxda)
Jadwalka 'Polyway' ee 'Gateway (ICT)' ee Bilawga Semesterka 1aad [ND I & HND I] Imtixaanka 2018/2019
Tags: 25 xaqiiqooyin xiiso leh oo aniga igu saabsan, 30 xaqiiqooyin xiiso leh oo naftaada ku saabsan, 50 xaqiiqooyin aniga igu saabsan, xaqiiqo xiiso leh naftaada wareysi, xaqiiqo xiiso leh naftaada reddit, xaqiiqooyin xiiso leh oo la wadaago, xiiso igu saabsan tusaalooyin, xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan naftaada jabiyaha barafka
« Sida Loo Dajiyo Ganacsi Guul Ah Oo Gaadhay Faa’iido Wanaagsan
Xariirka Ardayda GAPOSA www.studentportal.gaposa.edu.ng/Portal/Default »